Umthi kaSkål Bangkok ulumkisa nzulu ngobunzima bezokhenketho eThailand
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba Eziphambili zaseThailand » Umthi kaSkål Bangkok ulumkisa nzulu ngobunzima bezokhenketho eThailand
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Disemba 4, 2020
by UAndrew J. Wood-eTN Thailand
Amaphondo eThailand kwi-Red Red COVID-19 isilumkiso
Ibhalwe ngu UAndrew J. Wood-eTN Thailand
Kuya kucaca gca ukuba umonakalo obangelwe lushishino lwaseThailand olukhulu lokuhamba kunye nezokhenketho lubonakala lubalulekile ngomonakalo wexesha elide woqoqosho olucwangciselwe ukuba mandundu kunokuba luphuculwe.
Ngengqondo yangoku esemthethweni yokuvumela ishishini, eliqeshe izigidi eThailand, ukuba libingelelwe; iphoswe kwingcuka ye-COVID ngaphandle kokufumana imali ebonakalayo, ishiywe ukuze izenzele kwaye isilele. Ngaphandle kwethemba lokuba imida iya kuvulwa phakathi ku-2021, nditsho nokungeniswa kwezitofu kwiimarike eziphambili zokutya, kukho ukudideka kunye nokuvalwa kobunkokheli kwishishini lethu.
Ndibiza iinkokheli zethu zeshishini kunye norhulumente ukuba bathethe ngazwi-nye-ukunqanda ulwazi oluphikisanayo kunye nemiyalezo exubeneyo. Ilizwi elinye elisemthethweni kuphela. Zonke iingxelo mazenziwe kwaye zigunyaziswe kulo mthombo MNYE
Masibe neziko lethu Covid-19 Ulawulo lweMeko yezoKhenketho (i-CCTSA), echotshelwe yi-Nkulumbuso yase-Thailand u-Prayut Chan-o-cha kunye neenkokheli zokuhamba nezokhenketho kumacandelo karhulumente nawabucala.
Ukudideka kuxhaphakile. Kwangoko iNkulumbuso ibhengeze ukuba ezokhenketho azizukuvulwa phambi konyaka ka-2021 kodwa zombini i-MOT & S kunye ne-TAT zinike imihla eyahlukileyo.
Okwangoku nakuphi na ukungena eThailand ngabakhenkethi kubandakanya ukuvalelwa yedwa iintsuku ezili-14. Ndiqinisekile ukuba ayindim ndedwa umntu othetha le nto kodwa manditsho ngokuvakalayo nangokucacileyo ukuba ukunyuswa kwezokhenketho ngeeveki ezi-2 zokuvalelwa yedwa KUYA KUSELELA. Ngoku izitofu ziqala ukwaziswa masijonge ezinye iindlela ezinobungozi ezisezantsi zemida ekufuneka ivulwe ngokuthe chu. Ndiyambongoza urhulumente ukuba ayivumele le nto. Ngaphandle koko ukonakala kwesakhiwo kuqoqosho lwethu lwezokhenketho kuya kusithatha kude kube ngu-2025 ukulungisa.
Ngelixa urhulumente waseThailand ecingisisa malunga nokuba uzakuthatha ithuba kwaye asindise ishishini lokhenketho kwaye avule ubukumkani nakwindlela encinci nelawulwayo yokhenketho lwangaphandle, ingalo yohlalutyo lwezoqoqosho lweBhanki yaseKrungthai ityhile ukuba ubukumkani bulahleka ngaphezulu kwe-THB 8 yezigidigidi (I-USD 265m) ngosuku kwelahleko yokhenketho elahlekileyo ukusukela ekuqaleni kuka-Epreli ngenxa yebhloko engazange ibonwe ngabasemagunyeni baseThailand kwiinqwelomoya ezingenayo ezivela kwamanye amazwe ukusukela ekuqaleni kuka-Epreli.
Abanini beehotele baxhalabile. UVitavas Vibhagool, umphathi omkhulu weGrande Asset Hotels and Property, utshilo izolo ukuba zontandathu iihotele zayo kufuneka zomeleze izinga lokuhlala ngelixa iThailand isavaliwe kukhenketho oluninzi. “Asikaze sibenamazinga okuhlala asezantsi kangange-3-4% njengalo nyaka, njengesiqhelo ngama-70%” utshilo uMnu Vitavas.
"Le ngxaki inkulu kwimbali yethu, inkampani inikezela nge-10 yezigidi ze-baht (i-USD 332,000) ngenkxaso yezemali kwihotele nganye ngenyanga."
Uphando lwakutsha nje lucebise ukuba i-57% yezokhenketho kwihlabathi liphela iyakube itshatyalalisiwe ngulo bhubhane ngasekupheleni konyaka ka-2020. E-Thailand eli nani lizakusondela kuma-80% laze laqaqambisa iBangkok njengendawo ekuya kuthi kwehle owona monakalo mkhulu ehlabathini. I-Thailand izakuphulukana ne-THB 2.1 yeetriliyoni (i-USD 69.7billion) kwingeniso ngaphambi kokuphela konyaka kwingeniso yezokhenketho elahlekileyo.
Ukusuka kwimbono yam, amawaka ezigidi ze-baht kwimali engenayo ayilahlekanga nje kuphela yiThailand ziifemu zabakhenkethi ezinziweyo ezinje ngeehotele, iinqwelomoya kunye neenkampani zokuhamba kodwa nezigidi zabantu ababekade bezisebenzela iThais ababesebenza kumzi mveliso osele ungasasebenzi.
I-Skålleague kunye ne-GM yeHyatt Regency Bangkok Hotel, Mnu Sammy Carolus naye ukhathazekile ngekamva, evakalisa inkxalabo ngokulibaziseka kokuvula kwakhona ilizwe kubakhenkethi bamanye amazwe. “Elona xesha lide kushishino elingalindayo yikota yokuqala ka-2021 phambi kokuba icandelo leendwendwe liye lisiba mandundu,” utshilo uMnu.
"Ukuvulwa kwakhona kufuneka kwenziwe ngezigaba, ngokuqala kumazwe angaphantsi komngcipheko njengeVietnam, iSingapore, iTaiwan neBrunei," watsho. Okulandelayo kuluhlu kufuneka ibe yi-Australia, China, New Zealand, Japan ne-South Korea. ”
Uqoqosho lweshishini labakhenkethi laseThailand laqikelelwa kwi-20% ye-GDP yayo. Kodwa lo ngumntu onembali. Iziganeko ze-2020 kunye nomonakalo owenzekileyo kuphakamisa inkxalabo enkulu malunga nokubuya kwabakhenkethi bamanye amazwe eThailand kwi2021.
Amanani embali kaJanuwari 2020 ukuya ku-Epreli kulo nyaka kukwathetha ukuba ukusilela ukuvula iThailand kukhenketho lwangaphandle ngaphambi kokuphela kwe-2020 kusenokwenzeka ukuba kubonwe kubukhali ukujiya kwe-GDP yaseThai kwikota yokuqala ye-2021, ixesha elihlala livusa ubukumkani. I-Thailand kungafuneka ikulungele ukulinda ukuya kwiminyaka emine ngaphambi kokhenketho, njengoko besisazi ngaphambili, ukuqala kwakhona ngo-2025.
I-Thailand yenye yezona meko zisezantsi zamatyala e-coronavirus emhlabeni. Ngamatyala angama-4,039 kuphela kunye nokufa kwabantu abangama-60. Nangona kunjalo irhuluneli yeGunya lezoKhenketho laseThailand ithe nangona iThailand iye yathomalalisa izithintelo zokungena kwamanye amaqela kwezi nyanga zimbini zidlulileyo, bekukho kuphela i-1,200 yamazwe aphesheya efika ngo-Okthobha, okude kakhulu ukusuka kwizigidi ezithathu ngenyanga ngaphambi kobhubhane.
U-Yuthasak ugxininise ukuba ukubuyela kwakhona kwe-coronavirus kunokwenzeka kuthintele uhambo lwamazwe aphesheya kangangexesha elithile. Ngokophando olwenziwe zii-29 ze-TAT iiofisi zaphesheya, abakhenkethi bathe abanakulindeleka ukuba bathathe uhambo lwaphesheya ngaphambi kwehlobo elizayo.
UAndrew J. Wood-eTN Thailand
Ukulungelelanisa ukuthengisa ukhenketho kunye neemfuno zokhuseleko
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts zikhupha inkxalabo kwizicwangciso zokuhamba ...
Intlekele kwezokhenketho ngokungekho mthethweni eHolland: Akukho ndawo ikhuselekileyo ...
UGoogle ufuna bonke abasebenzi babuyela eOfisini ...
Uhlaziyo lukaSanta Lucia ngeNkanyamba uElsa
Iqela le-IMEX lityhila imfihlo
I-Thailand emangazayo yaqubuda kwi-wai: I-Rosewood Bangkok, a ...
I-COVID-19 Itshintsha Iindlela Zokuhamba KwamaTaliyane
I-St. Kitts & Nevis: Akukho Mida kwiNombolo ye ...
Ama-65% abakhweli beenqwelo moya e-US baxhasa iipasipoti zokugonya
I-SKAL Rome ineKomiti Elawulayo entsha
$ 15.39 yezigidigidi: Imakethi yokuqeshisa imoto e-China ...
Ukuphulukana neMeko yeLifa leMveli yeHlabathi kuya kuyichaphazela iLiverpool ...
I-SriLankan Airlines iqala kwakhona eMoscow-Colombo ...
Isibhakabhaka saseGuam siza kukhanya ngomlilo kunye nedrone ...
I-Sweatpants ekhubekisayo ebangela ukuba iStge enkulu isuke eSpain iye ...
Iinqwelo moya zaseMelika kungafuneka zibuyekeze umrhumo ...
IMauritius iseta i-14 'yamaqamza eholide' ...
Ukuhlaziywa | Izithintelo ezintsha ze-COVID eHawaii ...
Ukhenketho lwasekhaya luyaqhubeka nokubuyela kwakhona ngelixa ...
Iimaski ezinyanzelekileyo ezibuyela eLondon Underground
I-WHO kunye ne-IATA: I-3rd Wave ye-COVID ukusasazeka ngokukhawuleza ...
I-IATA iphehlelela iQela eliSebenzayo leAids eliShukumayo
Amandla oMoya oPhezulu weWizz anokuthwala iziqhamo
Isikhululo seenqwelomoya esikhulu kunazo zonke eTibet siqala ukusebenza
Ezokhenketho iiSolomons zikhala ngokusweleka kweCEO uJoseph Tuamoto
Ngaphezulu kwama-40,000 amatyala e-COVID kwiintsuku ezimbini i-India ibuza ...
Ukwahluka kwe-Delta eHawaii njengabahambi abangama-30,000 ...
Ukubuyiswa kweNtengiso yehotele: Jonga eJamani, eSpain nase ...
I-Carnival yonyusa ukuthunyelwa kwemisebenzi kwi-Cruise njengoko ibeka iseyile ...
I-COVID-19 Ukubulala ukuzibulala kuthintelwe uMama kunye noNyana
Monster Hurricane Ida kwiNdlela yeNgingqi yaseNew Orleans
I-St. Kitts kunye neNevis iyala ukungena kwabahambi abasuka ...
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica Ukuthatha Inxaxheba kwiAfrika ...
Zonke iinqwelomoya zirhoxisiwe, amazibuko avaliwe njenge-braces yaseShanghai ...
I-Taliban iqhuba i-Islamic Emirates yase-Afghanistan iyathanda ...
Ummangaliso woSuku lwezoKhenketho lweHlabathi eNepal luyavulwa kwakhona?
I-Samui iya ePhuket ngoku kwakhona kwi-Bangkok Airways
I-Itopiya ikhokela i-Afrika kubakhweli nakwezothutho ...
Amawakawaka axakekile njengeeNqwelomoya zeenqwelomoya zirhoxisa phantse ...